Home > Products > Reptile Heat Pad
Ny vokatra avy amin'ny Reptile Heat Pad , mpanofana manokana avy any Shina, Reptile Heat Pad , Reptile Heat Pad mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Reptile Heat Pad R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
16 Watt Reptile / Amphibian Heat Pad for Animals Contact Now
Fambolena hazavana mamirifiry Mat Contact Now
Heat Mat Snake Heat Mat ReptileZilla Heat Mat Contact Now
Fitrandrahana Aquarium Aqua PTC Contact Now
Reptile Heat Pad 80 GallonHeating Pad Reptile Contact Now
Electric Flowers Fruits Cultivation Heating System Contact Now
Toeram-pandrefesana karbenina karpony Contact Now
Reptile Heating Pad amin'ny Amazon Contact Now
Hafakely mitam-basy amphibiana eo ambanin'ny mpitrandraka mpamono bibikely bitika Contact Now
Toeram-pandehan'ny tsara indrindra amin'ny Reptile Heating Mat ho an'ny Tortoise Contact Now
Fitrandrahana Aquarium Tank UL Heating Mat Contact Now
PTC Heat Pad Far-Infrared Mats 20 Gallon Contact Now
8W Terrarium Heating Pad Warmer Electric Heating Pad Contact Now
Fish Tank Aquarium Heater Pads Australia Contact Now
Reptile Heating Coils Reptile Heat Pad 10 Gallon Contact Now
Heat Mats ho an'ny bibilava Contact Now
1. Ny fonosana fanamainana biby fiompy dia lafatra tonga lafatra ho an'ny biby fiompy fikarakarana amim-pitiavana. Ny fampiasana ny fampisehoana PTC (fanamafisana ny hafanana) sy ny fanamarinana UL dia azo ampiasaina mandritra ny vanim-potoana izay afaka mitazona ny biby fiompinao na dia ao anatin'ny ririnina mangatsiaka aza.
2. Tsy vitan'ny hoe ampiasaina amin'ny saka sy alika ny fantson-koditra, fa amin'ny tank sy ny haran-dranomasina ihany koa. Ny Ptc Heating Film , izay fitaovana fanatontosana biby fiompy, dia afaka mifehy ny fahefana automatique, mitazona ny hafanana amin'ny faritra sasany izay tsy 'Tsy maintsy manahy momba ny loza ateraky ny hafanana aho. Raha fitaovana maharitra maharitra sy tsy misy fotony ny fiompiana biby fiompy biby, dia tena azo antoka ny hampiharana ireo biby fiompy.
3. Fanompoam-pikarakarana ny fanamafisam-peo mahazatra. Manantena ny hanangana fiaraha-miasa amin'ny mpanjifa maneran-tany isika.